Airlinesgbọ elu Caribbean kwụsịrị ụgbọ elu n'ihi oke ifufe mmiri nke Dorian
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Airlinesgbọ elu Caribbean kwụsịrị ụgbọ elu n'ihi oke ifufe mmiri nke Dorian
Airlines • Airport • Akụkọ ọhụrụ Barbados • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Safety • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ gbasara Trinidad na Tobago
Ndị njem ụgbọ elu Caribbean na-efegharị ma na-apụ apụ
Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Piarco, Trinidad
Ọdụ ụgbọ elu Grantley Adams, Barbados
Ọdụ ụgbọ elu Norman Manley, Kingston, Jamaica
na August 26-28, 2019 nwere ike rebook ụgbọ elu ha maka njem ruo Septemba 8, 2019 n'ihi iyi egwu Tropical Storm Dorian.
Linesgbọ elu ahụ kwupụtara nkwụsị nke ụgbọ elu ndị a na Mọnde, Ọgọstụ 26,20190
Port-of-Spain na Barbados
Barbados gaa Port-of-Spain
Kingston na Barbados
Barbados ke Kingston
BW 459 Port-of-Spain na Barbados
N'ihe dị ka elekere asaa nke abalị CDT Sọnde, Tropical Storm Dorian dị ihe dịka 7 kilomita n'akụkụ ọwụwa anyanwụ ọwụwa anyanwụ nke Barbados na-aga ọdịda anyanwụ na 225 mph. Kemgbe ụnyaahụ, ifufe ya eburula 14 MPH.
Dorian, oke ikuku nke anọ nke oge ifufe nke Atlantic, na-aga n'ihu na-ewusi ike ka ọ na-aga na Windward Islands. A na-atụ anya Dorian iweta ọnọdụ ikuku mmiri na-ekpo ọkụ n'akụkụ ụfọdụ nke agwaetiti Antilles pere mpe. Warningdọ aka ná ntị oké ifufe na-emetụta Barbados, St. Lucia, St. Vincent na Grenadines. Emepụtara elekere oke ikuku maka Grenada na Martinique.
A na-atụ anya ụfọdụ mpaghara dị nso na Antilles pere mpe ịnata mmiri ozuzo abụọ ma ọ bụ anọ, yana ọnụ ọgụgụ dị elu na mpaghara nke ruru sentimita isii na Tuesday na Wednesday.
Hurlọ Ọrụ Ajọ Ifufe Mba ahụ kwuru na elekere kachasị na nso nso a na Sunday na Dorian na oké ifufe nke ebe okpomọkụ nwere ike ịbawanye nso na ajọ ifufe nke oke osimiri Caribbean na mbubreyo Tuesday.
Ọ ka dị oke aka ịchọpụta ma ọ bụrụ na Dorian ga-emetụta akụkụ ọ bụla nke United States na-enugharị, ma ọ bụ ọbụna ụzọ ya kpọmkwem mgbe ọ gafere na Windward Islands. Enwere ohere Dorian nwere ike ịda mbà n'àgwàetiti Hispaniola, ma ọ bụ ịga ugwu nke agwaetiti ahụ ma chekwaa ajọ ifufe na-aga n'etiti izu.
Ndị bi na Puerto Rico, Dominican Republic, Haiti, na Virgin Virgin Islands kwesịrị ị paya ntị na Tropical Storm Dorian na amụma ya.